Fifandonana tany Bekily : dahalo dimy maty, zandary iray naratra | NewsMada
Fifandonana tany Bekily : dahalo dimy maty, zandary iray naratra
Dahalo dimy namoy ny ainy, zandary iray naratra voatifitra teo akaikin’ny fony ka voatery nalefa haingana aty Antananarivo, vokatry ny fifandonana teo amin’ny dahalo sy ny zandary tany Bekily, ny asabotsy tokony ho tamin’ny 3 ora maraina.
Tafaverina amin’ny tompony kosa ny omby 50 izay nangalarin’ireo dahalo ireo. Nanenjika ireo dahalo ireo ny zandary miasa ao amin’ny borigady Bekily sy ny avy amin’ny Usad (Unite special anti-dahalo) avy any Betroka.
“Dahalo miisa 15 nirongo basy sy zava-maranitra no nanafika ka nangalatra ireo omby 50, ora vitsy talohan’io fifandonana io. Nandositra namonjy nianavaratra andrefana ireo olon-dratsy ireo rehefa nahazo ny hazany, saingy tsy nanaiky mora foana izany ny fokonolona sy ny zandary ka nanao ny fanarahan-dia faran’izay haingana rehefa nandre ny zava-nisy”, hoy ny fanazavana.
Tsy niandry ela, tratra ireo dahalo izay nitifitra avy hatrany ka velona ny fifandonana. Vaky nandositra ireo dahalo ireo ka tavela ireo omby rehetra. Nisy sasantsasany amin’ireo zandary, nanao fitsirihana nisava lalana teny amin’ny toerana nialan’ireo dahalo ireo. “Mbola nisy dahalo vitsivitsy anefa tavela tsy tafandositra niaraka tamin’ireo namany ka mbola nitifitra ary nahavoa ny iray amin’ireo zandary ireo teo akaikin’ny fony ka naratra mafy izy io. Namaly tifitra ihany koa ny mpitandro filaminana ka lavo ireo dahalo ireo”, hoy ny fanazavana. “Nisy ny fandraisan’andraikitra haingana dia haingana natao tamin’ity zandary naratra ity satria taorian’ny famonjena azy tao amin’ny « Antenne chirurgicale » ao Isoanala , nalaina tamin’ny angindimby tany an-toerana izy io ny tolakandron’io ihany, ary nalefa aty Antananarivo ka efa mahazo ny fitsaboana sahaza azy”, hoy ny zandary.